Ndụmọdụ iji meziwanye ngwa ekwentị gị na-ewu ewu n'oge ezumike | Martech Zone
Marketingre ahịa ngwa abụrụla isi ihe dị mkpa na ịwepụta ngwa ngwa oge niile site na ngwa ndị gara nke ọma. Ezi mgbasa ozi ahịa nwere ike ọ bụghị naanị ime ka ngwaahịa ahụ na-adọrọ adọrọ kamakwa weta ya na mmasị nke ọtụtụ ndị mmadụ. Ma oge ụfọdụ, nke ahụ bụ ngwa chọrọ. Enwere otutu ngwa dị mma nke na-enwetaghị ihe ruru ọtụtụ ihe ha kwesiri n'ihi na mgbasa ozi ahịa ha enweghị isi ma ọ bụ na-ezighi ezi iji weghara njirimara nke ngwa ahụ.
Na New Year na-abịa dị ka nke ọma, a ọtụtụ ndị mmadụ ga-azụta ọhụrụ phones, na nke ha nwere na-reinstall ha ngwa ọdịnala. Nke a bụ oge dị mma dị ka ihe ọ bụla iji malite mmezi na ngwa gị ma jide n'aka na nke gị so na ngwanrọ a na-ebufe ma ọ bụghị tụfuo. N'isiokwu a, m ga-enyocha ụfọdụ ụzọ dị mma maka mobile ngwa mmepe iji oge ezumike nke na-abia abata maka uru ha ma bulie arụmọrụ nke ngwa ha na ahịa site na ahịa elebara anya.
Mobile App Icon: Mmetụta mbụ gị
Mgbe ị na-eme nchọgharị na ngwa ahịa, ihe mbụ ị hụrụ bụ akara ngosi ngwa mkpanaaka. Obere onyonyo ahụ nwere ike ime ihe dị iche n’etiti mmadụ na ịpị aka na ngwa gị ma ọ bụ ịga n’ihu. O doro anya na onye ọ bụla enweela ọnọdụ ebe ha ga-egwu ịlele ngwa n'ihi na ọ nwere akara ngosi dị ala nke na-adịghị mma. Na-abịa na-adọrọ adọrọ, jụụ achọ oyiyi ga-amụba ọnụ ọgụgụ nke akụrisị gị ngwa ọdịnala ọkọkpọhi ukwu.
Mma bụ ihe zuru ụwa ọnụ, ọ na-amasịkwa onye ọ bụla. Ọ bụ ya mere ngwa ahịa azụmaahịa ga-eji dị mkpa. Ozugbo meghere, ibe ngwa gị ga-ebu ebe akara ngosi ahụ kwụsịrị. Ndị mmepe ga-enyerịrị nseta ihuenyo dị elu nke na-ewekọ ihe ngwa ahụ bụ, yana vidiyo ngosi ngwa nke kọwakwuru uru dị na nbudata ngwa ahụ, n'ụzọ dị mma.
Nkwalite ekwentị mkpanaka: Gwuo na Ike Gị
Ememe ndị ahụ dị n'akụkụ nkuku, Nke a pụtara na ọtụtụ mmadụ ga-agbanwe ihe ha na-eche site na ihe ha na-eme ma ọ bụ chọọ maka ngwaọrụ ha n'ihe metụtara ezumike ndị na-abịanụ. Nke a bụ ohere dị ukwuu maka ịbawanye azụmaahịa. Mgbe oge ezumike na-aga n'ihu, ọ dị mkpa ịghọta ihe ndị mmadụ ga-eme ma gbalịa itinye ihe ọmụma ahụ na ngwa gị yana ihe ngwa gị nwere ike inye ndị na-azụ ahịa ugbu a karịa mgbe ọ bụla. Examplesfọdụ ihe atụ nwere ike ị na-enye azụmahịa gbasara ihe ndị metụtara ezumike dịka ngwaahịa ịchọ mma ekeresimesi Ọ bụrụ na ị mepụtara ngwa mkpanaka mkpọsa.
Ihe ọ bụla sitere na mbelata ngwaahịa yana mmekọrịta na ndị na-eweta ọrụ ezumike ruru eru iji nye ngwa gị oge ezumike nwere ike inyere gị aka ịkwalite ngwa na ọrụ onye ọrụ. Banyere nke ikpeazụ a, ọ bụ ezigbo echiche ịmegharị ngwa gị ka ọ dịrị na mmụọ ekeresimesi, nke bụ ihe onye ọ bụla na-achọ n'oge a. Ọ bụrụ na ngwa gị bụ egwuregwu mkpanaka, ịnwere ike ịgbakwunye isiokwu Krismas maka mkpụrụedemede gị ma ọ bụ ọnọdụ gị, ma ọ bụ mejuputa ọkwa nke ekeresimesi.
Mgbasa ozi ngwa ngwa: Tweak Ad na-egwu Oge
Ọ bara uru iburu n'uche na oge ezumike na-egosi na ọtụtụ mmadụ ga-etinyekwu oge n'ụlọ na-emekarị. Nke a pụtara na mgbe ị na-eme nchọgharị na ịntanetị ma ọ bụ na-eji ngwa, ha ga-adịkwu njikere ịlele mgbasa ozi naanị n'ihi na oge ha nọrọ na ngwaọrụ amụbaala nke ukwuu. Ọ bụ ezi echiche ị gbanwee ugboro ugboro ka mgbasa ozi gị na-egwuri egwu na ngwa gị ka ha wee ghara ịbibi onye ọrụ ahụ. Itinye bọmbụ na otu mgbasa ozi ogologo ụbọchị niile nwere ike ime ka onye ọrụ kwụsị ngwaahịa gị kpamkpam, hapụ naanị ịlele ezumike ezumike gị.
Ngwa ngwa ngwa ngwa: Gbanwee maka Influx ndị ahịa
Oge na-abịanụ ga-abụ oge nkekọrịta na inye ndị ị hụrụ n’anya onyinye. Ihe nke a putara bu na otutu ndi mmadu ga na anata ekwenti ohuru. Ọzọkwa, dabere na ọdịdị nke ngwa gị, ezumike ga-eme ka okpu onye ọrụ gị dịkwuo elu. Ihe ihe a niile pụtara bụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ ọhụụ na-aga n'ụzọ gị. Ọ bụ ohere magburu onwe ya ịgbakwunye ụfọdụ ahịa ọhụụ na ngwa ahụ, dị ka azụmahịa dị jụụ maka ndị ọrụ ọhụụ ma ọ bụ nchịkọta ndị ọzọ nke mesiri onye ọrụ ike ọhụụ.
N'ikwu ya, ndị mmepe ngwa nwere oke ọrụ ha. Oge ezumike abụghị ihe a ga-atụ ụjọ ya dịka onye nrụpụta ngwa, kama ọ bụ ihe iji ghọta dị ka ihe ịma aka itolite. Ihe kachasị mma bụ na okirikiri ahụ ga-emeghachi yana kwa afọ ị ga-enwe nghọta karịa otu esi abịaruo ezumike ahụ.
Tags: igwu egwuakara ngosi ngwaezumike mobile ngwa ahịamobile ngwa admobile oge ad ngwamobile ngwa ahịamobile ngwa ọdịnalaekwentị ọhụrụ
Dee 8, 2016 na 2: 15 AM
Ezigbo! Daalụ maka ịkekọrịta ọdịnaya a na-enye nkọwa.
Dee 9, 2016 na 4: 13 AM
Nnukwu echiche maka usoro ire ngwa ngwa mkpanaka. Gbakwunye isiokwu oge na ngwa ga-eme ka ngwa ngwa mkpanaka.